XAYAWAANNADA CADAANKA AH EE KAZAKHSTAN: SHARAXAADDA ASTAAMAHA UGU MUHIIMSAN - XOOLAHA
Noocyada lo'da badani way badan yihiin, waana ay adag tahay in laga helo iyaga oo ku haboon dhamaan sifooyinkaaga. Xallinta hawlgalkan adag ayaa si tartiib tartiib ah, isagoo si faahfaahsan u akhrinaya sharaxaadda nuucyada ugu caansan.
Waa qaybta ugu caansan oo ay ka mid yihiin lo'da nooca hilibka ee jasiiradaha cadaanka ah. Waxaa laga yaqaanaa dhulka intiisa hore ee USSR, sidaa darteedna wuxuu ku guuleystay inuu ku guuleysto sumcad wanaagsan.
Wareegtadu waxay leedahay sifooyin gaar ah oo aan ahayn oo kaliya dibadda dibadda, laakiin sidoo kale sifooyinka ilaalinta iyo taranta, waxay si dhab ah u la yaaban kartaa sifooyinka wax soo saarka.
Laakiin, si aan loo kala qaadin jumlada caadiga ah, aan u leexanno sharaxaad faahfaahsan ee lo'da.
Waa maxay dhalashada cajiibka ah ee caanaha caddaanka ah ee cadaanka ah?
Aqoonta ilmo waa inuu ka bilowdaa taariikh gaaban oo asalkeeda ah. Waxaa la soo saaray jiilka Soofiyeeti. Noocyada noocan oo kale ah ee lo'da sida lo'da Hereford iyo wakiilada lo'daha maxalliga ah - Goobaha carabta iyo Kalmyk ayaa loo isticmaalay alaab hidde ah.
Laga soo bilaabo taranka ugu horreeya ee jinsiyado cadcad ee caan ah ayaa waxay raadinayeen inay soo gudbiyaan heerarka sarreeya ee wax soo saarka hilibka iyo roonaanta, iyo inta ka hartay - dulqaadkooda, iswaafajinta maadooyinka meelaha bannaan iyo dastuur adag oo adag.
Natiijadu dhab ahaantii way ka sii badisay filashooyinka, maaddaama ay soo bandhigtey qaab-dhismeed cusub oo cusub ayaa ka horaysa qaraabadiisa hiddo-wadaha ah.
Waa maxay farcanada ugu muhiimsan ee taranka maanta lagu sharraxay?
Inkastoo xaqiiqda ah in marka la qeexayo qaansiirka caddaanka ah ee cadmadu ay inta badan diiradda saaraan waxsoosaarkooda hilibka, dhab ahaantii, waxaa sidoo kale jira nooc isku dhafan oo noocaan ah.
Laakiin marka hore, inta lagu jiro wanaajinta tayada wax soo saarka ee lo'da, ugu weyn nooca jihada hilibkaSamaynta qaabka ay u dhacday sidan soo socota:
muddo dheer, lo'da waxaa lagu hayaa daaqado furan oo furan, waxaa loo ogolaaday inay galaan dhismaha xilliga jiilaalka;
inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee dhismaha, lo'du waxay si khaas ah u quudisaa kalluunka, iyadoo la adeegsanayo silage iyo dufnado kala duwan;
Qalabaynta waxaa fuliyay habka nuugista (taas oo ah, kadib dhalmada, lo'da aan la qaybin, muhiimadda ugu weyn ayaa la dhigey koritaanka weylaha);
tarbiyada si gaar ah loogu sifeeyo sifooyinka hilibka.
Si loo horumariyo nooca labaad ee caanaha - hilibka iyo caanaha, xulashada xayawaanka waxaa lagu sameeyay kaliya maaha qaababka hilibka, laakiin sidoo kale sheyga (qaddar gaar ah ayaa lagu meeleeyay subaga caanaha).
Waqtiga ka dib dhalmada, weylaha ayaa laga qaaday hooyada waxayna cabeen dhalooyinka. Si aad u samayso lo'da si fiican loo qaybiyo, waxay la siiyay qadar weyn oo kaliya ma aha oo kaliya diiradda, laakiin sidoo kale quudhent ku quudin sida feed.
Tixgalin isku mid ah oo ku saabsan habka lagu beero nooc ka mid ah waxqabadka qaansarrada waxaa na soo gaadhay annaga oo keliya oo aan ku ogaanno taariikhda ilamaha.
Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho dhamaan sifooyinka kor ku xusan iyo xayawaanka xayawaanka ah ee beertaada, taas oo kuu ogolaaneysa in aad ka hesho alaabooyin ka badan xayawaanada.
Qeexida sifooyinka daaqada ee dhirta cad ee cagaaran
Dibadda, ma adagtahay in la garto cunnooyinkaas, gaar ahaan illaa fekerka ku yaal magaca magaca caanaha. Ku saabsan xayawaankani waxaan dhihi karnaa in midabkoodu yahay mid ku taalla dhammaan galka casaanka. Laakiin halkan madaxa ah ee lo'da, salkiisa, iyo qaybta hoose ee caloosha iyo lugaha waxay leeyihiin midab cad. Caddaan sidoo kale waa buraashooda daboolka.
Cuntada qaansiirka cadaanka ah ee Kazakhstan waxay leedahay nooc hilib ah, xitaa haddii lo'da ay u badan tahay inay ka mid tahay hilibka iyo caanaha.
Iyadoo ay ugu wacan tahay horumarinta murqaha xooggan ee muruqyada, jirka waa foormo qaabeeya. Dareemaha xayawaanku waa mid aad u cufsan, sidaa daraadeed waxay u soo baxaysaa si adag (tani waxay si gaar ah u caan ku tahay qadhaadh).
Laga soo bilaabo Kalmyk iyo carabta afgembiga ah ee lo'da this loo wareejiyey Lugaha gaaban. Si kastaba ha ahaatee, qaabkani ma jiro kiis laguma tixgelin karo khasaaro, maaddaama lugaha sare ay aad ugu adag tahay xayawaanka si ay u qaataan miisaankooda cajiibka ah.
Intaa waxaa dheer, muruqyada lugaha ayaa sidoo kale aad u horumarsan, taas oo ka dhigaysa mid xoog leh oo deggan.
Diirad gaar ah waa in la siiyaa maqaarka noocaan ah. Waxay qabaan wax aad u fara badan, taas oo kuu sahleysa inaad si fudud u korto oo aad miisaanka u dhinto dhowr jeer sannadkii. Nudaha subcutaneous waa mid aad u horumarsan, iyada oo ay ugu wacan tahay waxaa jira raasamaal aad u baahsan oo ah unugyo adipose.
Gaar ahaan, miisaanka caadiga ah ee xayawaanku waa 295 kiiloogaraam, tirada dufanka gudaha waa 35.6 kiilo. Laakiin, si aad u qaadato qabow of this caleen this ka caawisaa ma aha oo kaliya dufanka ku ururay, laakiin sidoo kale sifooyinka ay dhogorta gaarka ah.
Xilliga xagaaga, waa isku mid sida kuwa ugu caansan caanaha: aad u gaaban, mid sahlan, dhalaalaya. Laakiin xilliga jiilaalka, sacadu waxay helayaan naqshad aad u dheer iyo qaro weyn, oo mararka qaarkood xitaa xitaa xayawaanka.
Sida lo'da lo'da, qaansiirka caddaanka ah ee cadaanka ah ayaa leh cabbir aad u ballaaran:
xayawaanka, dhererka xayawaanka waxay ka bilaaban karaan 125 ilaa 130 sentimitir, taas oo si weyn ugu tiirsan jinsigooda;
qoto dheerta laabta waa 68-70 sentimitir;
cabirrada dhererka naaska ka dambeeya garabka garabka waa 43-45 sentimitir;
wadarta laabta laabta waa 187-190 sentimitir;
dhererka buundada sidoo kale waxay kuxirantahay jinsiga xayawaanka waxayna kala duwanaan kartaa 150 illaa 155 sentimitir;
Metacarpus ee girth gaadho 18-20 sentimitir.
Waxyaalaha ay ka heleen caanaha qaansiirta caddaanka ah ee cadaanka ah waxay ku faani karaan
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ah taranka iyo dayactirka ee lo'da. Ma yaabsan yihiin inay yihiin kuwo aad uwanaagsan si ballaaran loo isticmaalo beerahahalkaasoo ay aad u adag tahay in la arko qof walba iyo meesha suurtogalka ah in xoolaha lagu hayo dhul daaqsimeed ayaa loo tixgeliyaa faa'iido wayn.
Faa'iidada ugu muhiimsan ee mawduuca waa kartida isticmaalka nooca badan ee naaxintataas oo micneheedu yahay guud ahaan kharashka ku baxa quudinta.
Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la sameeyo waa in la siiyo xoolaha leh meelo ballaaran oo daaqsin ah, oo leh saldhig tayo fiican leh. Tani waxay u egtahay, carabta caanaha ah ee cadmadu waxay leeyihiin dhammaan sifooyinka lagama maarmaanka ah, kuwaas oo lagu soo bandhigo kuwan soo socda quruxda badnaanta:
Xaqiijinta xoolaha si ay u quudiyaan.
Haysashada nambarkeeda hiddo-ahaaneed ee lo'da reer guuraaga, xayawaankani wuxuu caado u yahay inuu cuno cuntada si madaxbannaan ah loona fahmi karo cagahooda.
Nidaamka dheef-shiid kiimikaadka ah ee qaansiirta cadmadu waxay si fiican u socdaan oo waxay u dhigmaan cawska ugu da'da yar, taasoo u oggolaanaysa xayawaanka in ay dhaqso u helaan miisaanka nool.
Faa'idadani waxay si fudud u fududeyneysaa dayactirka caleemaha, sababtoo ah xiitaa xilliga jiilaalka, ma ahan lagama maarmaan in laf dhabarta xayawaanka lagu quudiyo.
Dulqaadida wanaagsan ee heerkulka sare iyo kuwa hoose.
Maqaarka aadka u adag iyo awooda lagu korinayo "timaha" jilaalka ayaa ka dhigaya isbeddel kuleyl ah oo xayawaan ah.
Sidoo kale, xilliga qaboobaha waxay badanaa ku ururaan tiro badan oo ah unugyada dufanka leh, taasoo u oggolaanaysa inay ilaaliyaan heerkulka jidhka oo deggan.
Xilliga xagaaga, miisaankooda inta badan waa la yareeyaa, dhogorta ayaa noqota mid gaaban, taas oo u sahlaysa in lagu adkeeyo heerkulka sare, la'aanta qoyaan.
Koritaanka xooggan ee xayawaanka yaryar.
Chicks-up up sida 8 bilood ee miisaankoodu ugu yaraan 210 kiilo, halka ballaaran ee bulaacda si fudud u gaaro 250 kiilo.
Markay tahay da'da hal sano iyo badh (iyo inta badan hore), xooluhu si fudud ayey u gaari karaan miisaanka 450-470 kiilogaraam. Tani waxay si aad ah u fududeyneysaa quudinta dheeraadka ah ee caanaha hooyada, taas oo bixisa jiridda weylaha oo leh waxyaabo aad u muhiim ah, iyo sidoo kale isticmaalka isku midka ah ee cuntada caadiga ah.
Cunto celceliska maalinlaha ah ee taranka waa 1 illaa 1.5 kiilo garaam, halka qiimaha waa 6 qaybood oo cunto ah. In badan oo si aad ah u xooggan ayaa hela dibedda culus.
Sifooyinka tayada sare ee hilibka lo'da.
Hilibka lo'da ee laga helay jasiiradaha cadaanka ah ee caanaha ah waxay kala duwanyihiin khudradda aadka u sareysa. Sidoo kale, xayawaankan waxaa lagu gartaa dufanku, oo kaliya maqaarka, laakiin sidoo kale inta u dhexeysa muruqyada jirka oo idil.
Tani waxay sabab u tahay, jarista hilibka waxay ku dhacdaa qaab marmar ah, taas oo hilib lo'aad ah oo lagu magacaabo marble.
Sidoo kale, iyada oo ay uga mahadcelineyso lakabka dufanka muruqa, hilibka ayaa leh walxo baruur badan iyo dhadhan fiican, iyo xayawaanka xilliga jiilaalka ma qaboojinayaan mana u dhimanayo cunto la'aan.
Dhiirigelinta xoolaha ee taranka la tilmaamay ayaa aad u wanaagsan.
Tani waxay ku xiran tahay xaqiiqda ah in xaaladaha cimilada ee caadiga ah ee jiritaanka lo'da ay yihiin dhulka reer Giriigga ah, halkaa oo heerkulka hawadu kor u kici karo + 50ºS, iyo habeenkii, xiitaa xagaaga, hoos u dhigaya tilmaamayaasha yaryar.
Sidaa darteed, xayawaanku waxay la qabsan karaan gobollada waqooyiga iyo koonfurta.
Awoodda isticmaalka maqaarka ee wax soo saarka maqaarka tayada sare leh.
Wakiilada maqaarka ayaa ah mid aad u weyn, iyadoo celcelis ahaan dhumucda labajibaariddu ay noqon karto 11.5 millimitir.
Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad codsato waxqabadka ugu daran, si loo soo saaro walxo gaar ah oo leh qiime sare.
Muuqaal noocee ah ee taranka loo saari karaa in ay faa'iido darrada?
Sida laga soo xigtay qiyaasta caanaha khibrada leh, meydka gawaarida caddaanka ah ee cadaanka ah waxa ay u badan tahay in la tixgeliyo cidhiidhi, taas oo aan u oggolaaneynin in jilku si buuxda u muujiyo suurtagalkiisa.
Dabcan, calaamadahani waa lo'da waxaa loola jeedaa mid ka mid ah noocyada ugu fiican, laakiin shaki la'aan, qaab kale oo qalfoof ah, musqulaha jirka ayaa noqon doona mid ka weyn.
Dhibaatooyinka badan ee dad badan ayaa ka mid ah daryeelka dheeraadka ah ee lo'da ee carruurtooda.
Isla markiiba dhalmada ka dib, lo'da ayaa xitaa muujinaysa gardarrada qofka, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in aan lagu soo dhex galin nidaamkaan haddii aysan jirin baahi dhab ah.
Kala saar sifooyinka wax soo saarka wakiillada caanaha.
Iyadoo aan lahayn dadaal dheeri ah, xayawaanka ku jira waqti gaaban. awood u leh inuu qoro oo keliya miisaanka rikoorka. Gaar ahaan, miisaanka dumarka qaangaarka ah waxay u dhaxaysaa 540 ilaa 580 kiilogaraam, inkasta oo xayawaanka shakhsi ahaaneed ay miisaankoodu noqon karaan ilaa 800.
Laakiin tilmaamayaasha rikoodhada ah ee buluugyada qaansiirka cadaanka ah ee caanaha ah waa 950 kiiloogaraam. Laakiin, haddii da'da hore ay dib u soo noqoto dibi, ka dibna dibeddu waxay awood u yeelan karaan inay muujiyaan calaamadaha culeyska ka weyn - illaa 1100 kiilo.
Marka la soo saaro gawaarida, qadarka hilibka hilibka la soo saaray ayaa badanaa ku jira qiyaas ahaan 53-55% miisaanka guud ee dhammaan xayawaanka xoolaha.
Iyada oo naas nuujin leh, shaxdani waxay kici kartaa ilaa 65%, laakiin kaliya kiiskan hilibka ayaa noqon doona dufan. Qalafka xayawaanka, inkastoo mid aad u adag, laakiin cidhiidhi iyo iftiin. Qaybta wadarta guud ee celceliska celceliska celcelis ahaan 13.9%, taas oo ah tiro aad u yar.
Soo saarista dhalashada: calaamadaha ugu muhiimsan
Qaangaarka labadaba lo'da iyo qashinka lagu yaqaan taranku waxay horey u dhacaan, laakiin waxay socon kartaa in ka badan 10 sano. Sababtoo ah arrintan, shimbirta xitaa labo qof ayaa leh awood ay ku koraan si dhakhso ah, dhalashada jiilasha badan iyo kuwo cusub.
Caadi ahaan, kadib dhalmada kowaad, kuwan soo socda waxay dhacaan sanad kasta. Fecundity of breed ma aha wax ka yar 90-95%.
Faa'iidada aadka u muhiimka ah ee qaansiirka caddaanka ah ee caanaha ah waa kuwa ay yihiin dareen hooyo oo si fiican u horumartay, taas oo ay uga mahadcelineyso heerka caleemaha dhalmada ee ku dhalata cunug cusub oo ku dhow 100%, inkastoo qofku had iyo jeer u soo baxo si ka wanaagsan.
Hase yeeshee, maaha arrin meesha dhalmada ay ku dhacdo, gudaha gudaha ama dibedda, xayawaanka ayaa sii wadi doona dibi ayadoo la adeegsanayo daryeelka lagama maarmaanka ah iyada oo aan dib-u-dhexgalin.
Ilmaha dhashay ayaa aad u weyn - celcelis ahaan, laga bilaabo 27 ilaa 30 kiiloogaraam (iyadoo ku xiran jinsiga). Laakiin, sababtoo ah cufanka weyn ee jirka, lo'da si adag u dulqaadanayaan geedi socodka dhalmada, dhibaatooyin aad u dhif ah ayaa dhacaya.
Wax soo saarka caanaha ee caanaha caddaanka ah ee caanaha ah
Awoodda caanaha la siinayo waa arrin muhiim u ah nooc kasta oo lo'da ah. Iyo, inkasta oo lo'du ku sharaxday ay tahay wax soo saarka hilibka, milkinku sidoo kale wuxuu tilmaamayaa mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah (gaar ahaan kuwa matalaya noocyada isku dhafan).
Haddii aad guud ahaan qiimeyneyso wax soo saarka caanaha ee caanaha caddaanka ah ee cadaanka ah, waa mid aad u hooseeya. Celceliska caanaha sanadlaha ah waa 1000-1500 oo kiiloogaraam oo caano ah.
Laga soo bilaabo lo'da hilibka iyo nooca caanaha ee beeraha qaar ka mid ah nuujinta waxay suurtogal ahayd in la helo 6000 oo kiiloogaraam oo caano ah. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidada ka mid ah taranka waa dhadhan iyo content dufan ee alaabta faa'iido leh. B
Sababtoo ah daaqsinta meel bannaan iyo quudinta xayawaanka leh cuntooyinka khaaska ah, caanahoodu waxay noqdaan kuwo aad u faa'iido badan oo ka dhasha cayayaanka kale ee caanaha. Tilmaamaha baruurta ayaa sidoo kale aad u sarreeya, waxayna u dhigantaa 2.8-4.8%.
Dabcan, heerka dufanka caanuhu wuxuu awood u leeyahay inuu isbedelo iyada oo ku xiran nafaqada iyo muddooyinka dhalmada, laakiin guud ahaan wali waa heer sare.